Mens Long ကအင်္ကျီလက်အဖုအင်္ကျီရောင်းချ
တရုတ် Mens Long ကအင်္ကျီလက်အဖုအင်္ကျီ MZ စထုတ်လုပ်သူ Mens Long ကအင်္ကျီလက်အဖုအင်္ကျီ, 80% နိုင်လွန်, OEM ဝန်ဆောင်မှုရနိုင်သော, လက်ကားနှင့်လက်လီထောက်ပံ့။ အမျိုးအစား: Mens Long ကအင်္ကျီလက်အဖုအင်္ကျီ။ အထည်အလိပ်: 80% နိုင်လွန်, 20% Spandex ။ နေရောင်ကာကွယ်နှုန်း: UPF 50+ ။ အလေးချိန်: 190 ~ 200g ။ supply အမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီဇိုင်း: စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်း။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: MZ စသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်။ Size: S-XXL ။ အရောင်: သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်။ သုံးပါ: လှိုငျးစီးဘို့။ MOQ: 1000 PCs Per စတိုင် Per အရောင်။ အခမဲ့အဘို့ရေစိုခံအိတ်။ website က: http://www.sunlintoys.com.cn
Long ကအင်္ကျီလက် Rashie အမျိုးသမီးရောင်းချ
တရုတ် Long ကအင်္ကျီလက် Rashie အမျိုးသမီး MZ စကုမ္ပဏီ Long ကအင်္ကျီလက် Rashie အမျိုးသမီး 80% နိုင်လွန်လုပ်ထားတဲ့နှင့်လှိုင်းစီးနေသည်များအတွက်လက်လီရောင်းချ 20% Spandex, ကနူးဝါးတားပိုလိုပေး။ အမျိုးအစား: Long ကအင်္ကျီလက် Rashie အမျိုးသမီး။ အထည်အလိပ်: 80% နိုင်လွန်, 20% Spandex ။ နေရောင်ကာကွယ်နှုန်း: UPF 50+ ။ အလေးချိန်: 190 ~ 200g ။ supply အမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီဇိုင်း: စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်း။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: MZ စသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်။ Size: S-XXL ။ အရောင်: သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်။ အသုံးပြုမှု: စသည်တို့ကိုလှိုင်းစီးနေသည်, ကနူးဝါးတားပိုလို, ရေ Survival သင်တန်း, MOQ: 1000 PCs Per စတိုင် Per အရောင်။ အခမဲ့အဘို့ရေစိုခံအိတ်။ website က: http://www.sunlintoys.com.cn
Ladies ရှည်အင်္ကျီလက် Rashie လက်လီရောင်းချ
တရုတ် Ladies ရှည်အင်္ကျီလက် Bodysurfing, Wakeboarding များအတွက် Rashie MZ စထုတ်လုပ်သူလက်လီ Ladies ရှည်အင်္ကျီလက် Rashie, 80% နိုင်လွန်၏ လုပ်. 20% Spandex S-XXL ။ အမျိုးအစား: Ladies ရှည်အင်္ကျီလက် Rashie ။ အထည်အလိပ်: 80% နိုင်လွန်, 20% Spandex ။ နေရောင်ကာကွယ်နှုန်း: UPF 50+ ။ အလေးချိန်: 190 ~ 200g ။ supply အမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီဇိုင်း: စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်း။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: MZ စသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်။ Size: S-XXL ။ အရောင်: သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်။ အသုံးပြုမှု: စသည်တို့ကို Wakeboarding, Bodysurfing, MOQ: 1000 PCs Per စတိုင် Per အရောင်။ အခမဲ့အဘို့ရေစိုခံအိတ်။ website က: http://www.sunlintoys.com.cn
ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက် Rashguard လက်လီဖွင့် Zip
တရုတ် Long ကအင်္ကျီလက်ရှည်အင်္ကျီလက် Rashguard, နိုင်လွန်ပစ္စည်း၏ လုပ်. , အမျိုးမျိုးအရွယ်အစား, 200g မှ 190 အထိ Zip Rashguard ထုတ်လုပ်သူ MZ စအထည်ချုပ်လက်လီဖွင့် Zip ။ အမျိုးအစား: Long ကအင်္ကျီလက် Rashguard တက် Zip ။ အထည်အလိပ်: 80% နိုင်လွန်, 20% Spandex ။ နေရောင်ကာကွယ်နှုန်း: UPF 50+ ။ အလေးချိန်: 190 ~ 200g ။ supply အမျိုးအစား: OEM ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီဇိုင်း: စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်း။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: MZ စသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်။ Size: S-XXL ။ အရောင်: သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်။ အသုံးပြုမှု: လေလှိုင်းစီး, စွန်ဖြင့်လှိုင်းစီးခြင်း, ယပ်လှေပြိုင်ပွဲ, လှော်လှိုင်းစီးနေသည်, ရေကူးတက်ရပ်, etc MOQ: 1000 PCs Per စတိုင် Per အရောင်။ အခမဲ့အဘို့ရေစိုခံအိတ်။
ရောင်းမည် White T / C poplin 110x76 35/36 "
အဖြူရောင် T / C poplin polyester / ဝါဂွမ်းလွင်ပြင်အထည် 45sx45s 110x76 35/36 "နှစ်ဆခေါက်ဘုတ်အဖွဲ့ထုပ်ပိုး
31 - 40 Total 661 (67 pages)